Ko kana Telefónica yakashandisa Linux? Chii chingadai chakaitika? | Linux Vakapindwa muropa
Ko kana Telefónica yakashandisa Linux? Chii chingadai chakaitika?
Joaquin Garcia | | Linux vs. Windows, Noticias
Pakati pemaawa ekupedzisira zita reWannaCry rakataurwa pamusoro paro mune dzakawanda midhiya nenzvimbo. Chikonzero: kuva rudzikinuro rwakamanikidza Telefónica nemamwe makambani makuru muEurope kuti vavhare makomputa avo. NeChishanu chapfuura, kupararira uye kudonha kwemakomputa eTelefonica kwaizivikanwa nekuda kwekushanda kweWannaCryhlengwareware. Sezvo Telefónica iri kambani yakasarudzika mukutaurirana, mune imwe nguva yemaawa, malware yakapararira kumakambani makuru muEurope, kusanganisira mabhangi, zvipatara uye vashandisi vepaTeleficaica.
Dambudziko rakasvika padanho zvekuti Telefónica pachayo yakatumira email kune wese munhu achivabvunza kuti vafadze dzime makomputa avo uye vadzime netiweki yeWi-Fi kubva pamidziyo yavo. Dambudziko remakomputa chairo iro vazhinji vakanongedzera kwariri senge rakakura pagore. Asi Chii chingadai chakaitika kana Telefónica ikashandisa makomputa neGnu / Linux? Izvo zvakafanana zvaizoitika here?
Huwandu hwememes uye majee akabuda akatenderedza kushandiswa kweWindows uye WannaCry anga achizivikanwa senhau uye nedambudziko pacharo. Nekudaro, kushandura mashandiro ehurongwa kwaisazo shandura zvinhu. WannaCry ndeyekudzikinura iyo sezvo ichimhanya inonyora iyo yose hard drive uye inoratidza skrini uko inokuzivisa iwe kuti kana iwe uchida iyo data iwe unofanirwa kuibhadharira.
Iyi rudzikunuro inoshanda paWindows makomputa, ndokuti, ese makomputa ane hutachiona ane Windows inoshanda sisitimu. Asi dambudziko hombe neWannaCry, sekuona kwandinoita, haisisiri kushanda kwayo asi kupararira kwayo. Kuparadzira izvo ingadai isina kudzivirirwa dai Telefónica ikashandisa imwe sisitimu yekushandisa.
WannaCry ndeye ramsonware inoshanda paWindows asi ingadai yakamiswa mumakwara ayo kana vashandisi vakavandudza makomputa avo. Microsoft ichangobva kuburitsa chigamba chekuchengetedza chinotadzisa WannaCry kushanda. Sezviri pachena havazi vese vanovandudza makomputa avo.
1 Saka ndingaite sei kuchengetedza yangu WannaCry timu?
2 Maitiro ekuvandudza edu Gnu / Linux system
3 Maonero ako pachako panyaya yeTelefonica
Saka ndingaite sei kuchengetedza yangu WannaCry timu?
Kana iwe uine Windows, chinhu chakanakisa kuita ndeche gadziridza iyo inoshanda sisitimu neese ekuchengetedza mapakeji ayo anowanikwa kune yedu vhezheni; Nhanho yechipiri ichave yekushandisa backup system uye kuita backup yeedu data isati yanonoka uye pakupedzisira kugadzirisa edu antivirus uye ekuchengetedza masystem. Kana isu tichida kugadzira backup yeiyo hard drive, Clonezilla chinhu chakasununguka uye chakavhurika sosi chishandiso icho chichatibatsira neichi.
Panyaya yeGnu / Linux, zvinokurudzirwa kugadzirisa mashandiro ehurongwa nemapakeji azvino nekuvandudzwa, nekuti kazhinji zvese zvinogoverwa zvinokurumidza kuisa zvigamba uye mapakeji ekuchengetedza kugadzirisa matambudziko aya.
Maitiro ekuvandudza edu Gnu / Linux system
Chinhu chakanaka sarudzo gadzira script yeiyo inoshanda sisitimu yekugadzirisa uye isa iyi script pane kupinda kuitira kuti nguva yega yega komputa painobhenekerwa inogadziridzwa neshanduro dzichangoburwa. Kuti tiite izvi, tinovhura gedit uye tinyore zvinotevera:
Isu tinoichengeta ine zita rekuti "kugadzirisa.sh" uye tobva tachiisa muKunyorera Zvikumbiro. Nekudaro, kana isu tatanga chikamu chedu, isu tinenge tichizobvunzwa iyo mudzi password kuti ivandudze iyo inoshanda system. Uye nezvo iyo yekushandisa system ichagadziriswa.
Kunyange isu tataura kuti Gnu / Linux haitsigire WannaCry, nei uchiita zvese izvi? Kungoti nekuti WannaCry ine shanduro dzese masisitimu anoshanda. Windows ndiyo sisitimu inoshanda inowanika pamakomputa epamba uye pamabhizimusi makuru. Asi yechipiri inonyanya kushandiswa system mumaseva ndeye Gnu / Linux. Sisitimu iri mumaseva mazhinji emakambani mazhinji nemasangano; iyo Internet yezvinhu iri kugadzirwa zvakare neGnu / Linux masystem uye mafoni anoshandisa iyo Linux kernel. Ndizvozvo iyo Linux vhezheni yeWannaCry chichava chinhu chinotevera chatinoona. Ndicho chikonzero nei zvichikosha kugadzirisa yedu yekushandisa system.
Maonero ako pachako panyaya yeTelefonica
Chero kupokana kwemakomputa kunotungamirwa nekukonana kwemaitiro anoshanda. Icho chinhu chatisingagoni kudzivisa. Uye muzviitiko zvakawanda, Kana zvasvika pakuchengeteka pamusoro pezvose, Gnu / Linux anogara ari iye anokunda. Kushanda kwaro kwakamanikidza, kunyangwe kumuridzi wacho. Zvinoreva kuti Gnu / Linux haina kukanganiswa nekurwiswa senge WannaCry senge mune mamwe masisitimu anoshanda.
Telefónica zvirokwazvo ingadai isina kuve nematambudziko akafanana neGnu / Linux seWindows, uyezve vangadai vasina ivo dai mashandiro avo aikwirisa. Asi chero zvakadaro, Linux, Windows kana Mac, WannaCry haina kudzivirirwa uye icharamba iripo paInternet, kutyisidzira kuchave kuripo kune avo vasingavandudze makomputa avo kana kukanganwa kuita yekuvandudzwa kumisikidza.
Saka chandinowana pane izvi zvese, chandinofanira kuwana kubva mune zvese izvi, ndizvo izvo yedu yekushandisa system isu tinogara tichifanira kuichengetedza sezvo zvichiramba zviripo uye pachave nehuipi hunogumbura dhata redu nemidziyo yedu. Zvisinei Telefónica yakadzidza chidzidzo chayo here?
Mufananidzo - Mykel
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Ko kana Telefónica yakashandisa Linux? Chii chingadai chakaitika?
Ndine urombo kupokana nezve posvo yako, hapana chingadai chakaitika kuTelefonica kana ikashandisa Linux, WanaCrypt0r 2.0 kana WanaCry inoshandisa kukanganisa muSMB 1 masystem ekutaurirana kupararira kuburikidza nemawindows network, chimwe chikanganiso chainacho ndechekuti inoshanda ne iyo registry yemahwindo uye inodarika iyo system Administrator uye inonyora mafaera kwete iyo sisitimu yekushandisa, ndinobvuma zvachose kuti dai vakagadziridzwa izvi zvingadai zvisina kuitika kwavari, Chisingafungidzike ndechekuti kambani yakaita seTelefonica haina masisitimu ayo yakagadziridzwa kana inoshandisa masystem akachengeteka zvakanyanya se linux. mune gizmodo, hypertextual, uye xataka vanotsanangura mashandiro anoita RAMONWARE sekutaura kweRTVE;)
Isaac Palace akadaro
Pamusoro pezvo, chinyorwa chinozvipikisa, kudivi rimwe chinoti dai vakashandisa GNU / Linux vangadai vasina kutapukirwa zvobva zvaenda ndokuti iyo Operating System haina basa ...
Pindura kuna Isaac Palacio
Haylem Candelario Bauzá akadaro
Pindura Haylem Candelario Bauzá
Marcial Diaz Toledo akadaro
Kwete izvozvo, uye zvinoenderana nezvaunotaura muchinyorwa, iyi rudzikunuro inongokanganisa dzimwe dzisiri-dzakavandudzwa maWindows, dai Telefónica yanga isina Windows makomputa isina kukwidziridzwa kana ivo vakashandisa imwe sisitimu yekushandisa, vangadai vasina kukanganiswa.
Pindura kuna Marcial Diaz Toledo
Zvinotaridza kwandiri sechinhu chakasimba kuti muna 2015 ndakamunyevera pane rake bhurogu uye ndikaraira matanho akareruka ekudzivirira iyi njodzi.
Pindura kune Zvitsva
Zvaizodai zvakaitika kuti shefu vangadai vasina kukwanisa kuisa muhomwe madhora anopihwa magedhi ebhajeti kumakambani eruzhinji neasina veruzhinji kana vaita rwendo rwavo rwekuEurope.
Ingo kuwedzera ...
Unoziva Chema Alonso?
Iye anovimbisa kuti windows yakachengeteka seLinux uye anotsanangura zvinhu zvakawanda zvinoitika munyika yekuchengetedza, ini ndinokurudzira hurukuro dzake (YouTube). Nenzira, anoshandira telefonica haha
mumwe munhu akadaro
NeLinux, hapana chingadai chakaitika, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, asi pane yakapusa pakati pavo: kazhinji muLinux, hatishandisi mushandisi nemvumo yekunyorera / kunyorera hard drive, saka hapana chingadai chakaitika.
Pindura mumwe munhu
ubuntu! = linux, zano rinokosheswa, asi chinyorwa chaunoisa ndeche ubuntu / debian chete
Diego regero akadaro
Asi GNU / Linux neMac zvinokanganiswa sei nekushandisa njodzi yeWINDOWS?
Mumakore ese aya ini handisati ndanzwa CHIMWE CHENYAYA chemumwe munhu akave nekombuta yake yakavharidzirwa nemaitiro aya, dzidziso dzinoti zvishoma zvinogona kuitika.
Pindura Diego Regero
Ndakaona morons dzichikurudzira kudzima mawindow eWindows kwemakore ikozvino, vobva vanyunyuta.
Uye Windows worm inomhanya sei paLinux?
Yako hypothesis inoshanda chete kana honye ikakwanisa kumhanya paLinux (kana paine hutachiona Windows PC ine mukana wekuwana mafaera).
Kwandiri, 100% Linux mamiriro haakwanisike pakurwisa uku, nekuti iri yeplatform.
Sei uchidana Ubuntu kana Debian Gnu / Linux? Zvakanaka, iyo script yaunofunga kuti iyo system igadziridzwe muGnu / Linux, inoshanda chete kune Ubuntu kana Debian kana yakatorwa kubva kune iwo anoshanda masisitimu Ini handinzwisise iyo mania yekudzora Gnu / Linux kune izvo zvinogoverwa, sekunge kuti havasisipo. Nehurombo izvo zvinoitika mumazhinji ebloggi paInternet, apo isu tese tinoziva kuti kune akawanda akawanda. Ndokumbirawo titange kuudza sezvairi.
Ndinoona kuti chero munhu akanyora chinyorwa ichi haana kunyatsojeka nezvezvaanotaura. Muchokwadi, haana zvakawanda zvekuziva izvo zvaari kutaura nezvazvo futi. Iyi malware haienderane neLinux, kana neMac, kana neshanduro zhinji dzeWindows. Shanduro dzisina kunyorwa dze XP chete ndidzo dzaive nenjodzi. Uye iwe waigara uchifanirwa kukumbira rubatsiro rweakakomba kuti ubatanidze chinongedzo kumeseji yeemail, inoita kunge ndiyo nzira yekuparadzira yakashandiswa kuburitsa malware.
Zvakanakisa Mu telfonica linux inoshandiswa. Pane chokwadi chekuti haupindure uye chakakosha. Maseva. Munzvimbo yemubatanidzwa, Windows kana Linux inoshandiswa zvichienderana nebasa rinozadzikiswa uye nehunyanzvi hwayo. Kambani yakanaka ine chete Linux kana chete windows hapana.
Zvine musoro kufunga kuti kukuvara kuri mumakomputa / maseva akaiswa mumumbure neiyo sisitimu inosanganisirwa nemushandi, kwete yekupedzisira komputa. Iyo chikuva uye au.
Kune rimwe divi, kune zvakare rudzikunuro rweLinux, uye dai izvo zvanga zviri izvo, kukuvara kwacho kungadai kuri kukuru.
Iyo wannacry inokanganisa kuti kana kwete chishandiso chakabatirwa.
Nzira yekuparadzira ndiyo chete inonakidza chinhu. Yaiva 1day. Asi kune dzimwe nzira dzekuparadzira kune iyo smb.
Chinyorwa ichi chinosiya kuravira kusingazivikanwe mumuromo mangu.
"Kune rimwe divi kune zvakare rudzikunuro rwe linux." Ehe, iro chete "diki" dambudziko remvumo yemidzi mafaera rinosara. Hapana mushandisi akajairika anokwanisa kunyorera midzi yekuparadzanisa yakadaro. Chero zvazvingaitika, mafaera ari mushandisi anomhanyisa iyo malware anozonyorwa. Kuti unyore bhuti unofanira kuva nemidzi yemvumo. Edza seyakajairika mushandisi kuti uone kana iwe uchiiwana. »$ Gpg -c / bhutsu«. Edza kuona zvinoitika.
Uye zvino chakanakisa: «uye dai zvaive zvakadaro, kukuvara kwacho kungadai kwakakura»… sei? Chii? ... Mwari! ... Skynet ingadai yakabatanidzwa zvechokwadi. Mune iyo inofungidzirwa kesi yekuti paive nelinux makomputa, kukuvara kwaizove kwakafanana mune yakaipisisa kesi, sezvo ivo vaizobata yakafanana data. Kana kuti linux ine simba rekuburitsa apocalypse?
Hei, ndini uya kubva kumberi ^ ^ hee
Kwayedza chaizvo uye ndakanga ndisati ndanzwisisa zvakanyatso nyatso. re verenga ndinoona ndataura zvawataura.
Kana uchida, usanditumire :)
Linux kukumbira ruregerero
Ini ndinokutsunga iwe kuti ukwanise kutapura network ne wannacry isina chero windows pc. Iwe haugone kuve wakanyanya kutadza nenyaya ino….
Kushuma posvo. Uku hakusi kunyepa, hakusi kuva nemhedzisiro yezvaitika.
Telefonica HAIYE YAKABATA MUNHU. Uye zvishoma kune vashandisi uye mamwe makambani. Kunyangwe mukati meTelefonica, hutachiona hwave hushoma.
Iko kupararira kuri nesamba. Zviripachena Telefonica haishandisi iyi protocol kunze kweku pakati pePC dzeiyo intranet yayo. NemaPC mashoma akabatanidzwa, sekudzivirira, vashandi vakarairwa kudzima nzvimbo dzekushandira kudzivirira kupararira, nekudaro zvese zvakadzimwa, kwete nekuti zvese zvakatapukirwa. Uye kukanganisa kune chero imwe kambani kana munhu kunobva kune imwe nzvimbo, kwete kutapukira kubva kuTelefonica
Salu2 kune ICT yeManresa
Mhoro. Ndini ke1st nguva yandinopindira mune ino foramu, kunyange ini ndichiitevera nesimba.
Ini ndagadzira iyo script, ini ndachengeta iyo mune yangu yega dhairekitori uye ini ndaiisanganisira iyo mukushandisa pakutanga. Nekudaro haina kumhanya painotanga-kutangazve, ini ndakachengeta zvisizvo?
Ndiregererei, asi ini ndinongove mushandisi wehunhu uye ini handisi kugona kunyora zvinyorwa.
Pindura kune ispiriux
Icho chinyorwa hachikushandire iwe nekuti chinomhanya kubva kumushandisi uye chinoda password. Izvo zvisiri kuzokubvunza iwe kunze kwekunge iwe uliasudo kudesktop vhezheni senge gksudo kana kdesudo, kana iwe unoshandura zvakananga script iripamusoro uye woita kuti itakure imwe yeiyi vhezheni negui.
Izvo zvinogona zvakare kugadzirisa iyo yekuvandudza nekuwedzera iyo sarudzo "-y", zvikasadaro ichave zvakare yakamirira odha.
Zvakanaka, hazvisi izvo kuti Telefónica ine zvishoma Linux chaizvo
Pindura kuna anon
Aive chaiwo makomputa aimhanya gnu / linux yeavo vashoma vasina kutapukirwa.
Pindura kuna Nanana
Miguel Mayol naTur akadaro
Hutachiona hwakashata hweLinux seizvi (uye dzakapfuura) haisati yagadzirwa.
Uye ndosaka, pakati pezvimwe zvinhu, yatove neanoda kusvika zana% maseva.
Ini handifunge kuti rakakura cyberattack paLinux rave padyo, uye kunyangwe zvishoma nehutachiona.
Avo vedu vasingashandise MS WOS pakombuta (Linux (es), Mac OS kana FreeBSD) KANA TAKachengeteka. Kutaura kuti "allomejó" inogadzira chimwe chinhu chakashata mune ramangwana, ZVINONYANYA KUKOSHA.
Uye mumwe munhu anonyora izvi, gamer, uyo mushure menguva mune mbiri bhutsu, uye kunyangwe munguva dze XP akatamira kuGNU / Linux 100% akaguta nemavhairasi ayo kamwe chete pagore kunyangwe vakamanikidzwa sei kudzoreredza sisitimu.
Pindura Miguel Mayol ini Tur
Kungova ne "Chema Alonso" seyekunze chengetedzo chipangamazano kunosiya zvakawanda kufunga nezveTelefonica "IT Vashandi", ivo vari chokwadi mumugwagwa !!!
PSR murwi akadaro
Hapana mhosva, ko Microsoft yakabhadhara peji ino kuti iite iyi posvo? Zvingave zvinonakidza kuziva, nekuti munzvimbo dzakasiyana siyana mune "zvinyorwa" (zvisina fungidziro, ndingati) uko kwavanoedza kuisa imwechete (isiriyo) pfungwa mumisoro yedu: "neGNU / Linux chinhu chakafanana nechaizoitwa neWindows. zvakaitika. "
Chero ani anoda muenzaniso wemarara nemanyepo anogona kunyorwa, anogona kuverenga izvi: https://www.xataka.com/seguridad/ni-linux-ni-macos-te-salvaran-del-ransomware-la-condena-de-windows-es-su-popularidad
Zvinotyisa kuziva kuti peji rakakumikidzwa ku "Linux" (ticha tanga riini kuidana kuti GNU zvinoenderana?) Inoburitsa iyi mhando yekunyora, inoita kunge yakanyorwa nechinangwa chekusiya Microsoft neayo spy system inoshanda mu chinzvimbo chinogoneka, chepakati uye chine njodzi zvachose maererano nekuchengeteka.
Usanyepere vanhu, neGNU / Linux malware ingadai isina kupararira, paisatombove nehutachiona. Kana iwe uchizoshambadza Windows, isa banner.
Pindura PSR Militant
Ispiriux, usazvinetse nezve iyo script, usashatise makina ako neaya magwaro, kugovera kwanhasi uye zvako shandisa aptd uye zvinokuzivisa iwe kana iwe uine zvinyorwa. Kana iwe uchida kuvaita echinyorwa, ipa yako dash uye isa yekuvandudza.
Hazvina mhosva kuti akapindwa muropa sei ne linux, zvinoita kunge zvakapusa.
dok, zvinyorwa zvitsva, ndatenda nemazano ako. I think I will teerera kune yechipiri. XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Bill Gates akadaro
"WannaCry ine shanduro dzese masystem anoshanda" wobva wati, "ndinoreva, vhezheni yeWannaCry yeLinux ndiyo ichava chinhu chinotevera chatinoona." Vakanga vari? Iko kune yeLinux vhezheni kana urikushanda pairi? Kufanotaura here kana kuti chishuwo? Zvinodemba.
Regedza kugadzira uye kumhanyisa zvinyorwa kuti zvishongedze sisitimu kugadzirisa. Kungovandudza iyo system kazhinji kuburikidza neye package package inokwana. Mamwe masisitimu akaita seUbuntu, Manjaro kana Antergos ane yavo yekuvandudza iyo inokuzivisa iwe nezve package package. Kuona kuti ndeapi marongero aripo usati wagadziridza kunogona kukusevhesa musoro wepamusoro, kunyanya kana iwe uchibata rolling kuburitsa distros iyo isingawirirane chaizvo nekadhi yemifananidzo yawakaisa. Iyo graphical nharaunda ichakutenda iwe. Uye pamusoro pezvose, hapana chekumhanyisa zvinyorwa zvine mavambo uye maitiro pahurongwa hazvizivikanwe. Kunyanya kana vachikumbira mvumo yemidzi. Aya haasi mahwindo, ndeekubasa?
Pindura Bill Gates
Linux haisi yekungobata chete uye zvigadzirwa (apt kusimudzira), zvakare ndinofunga kuti posvo haina basa, kune zvakawanda zvinopesana, ndinobvumirana nekomendi nezve samba (ndiyo nzira iyo rudzikunuro rwakapararira mu INTRANET ye telefonica) Zvirinani kutarisa kunze kweChema's blog. Zvakare iyi nzvimbo ndeye linuxeros uye kwete WindCRYos blog: http://www.elladodelmal.com/2017/05/el-ataque-del-ransomware-wannacry.html
Ini handinzwisise izvi zvisirizvo ... ndinobatanidza zvese zvakataurwa. Chinhu chekutanga hutachiona chakabata asiri-akagadziridzwa mavhezheni eWindows, sezvavanotaura kunze uko, ini ndanzwa vazhinji "mahunyanzvi" kudzima masystem ... uye kune rimwe divi, kubva pane zvandinoona pamakomputa andinoongorora, ruzhinji yevashandisiwo zvavo Hazvireve kuti ini ndinogadziridza masisitimu nemazvo ... ini ndawana windows ine mazana maviri kana mazana matatu akamirira kuvandudzwa ....
Chinhu chechipiri ndechekuti Gnu / Linux ingadai isina kukanganiswa nenzira imwecheteyo, nekuti kubata "System mafaera" iwe unofanirwa kuve mudzi uye hapana mushandisi ane Linux anowanzo ita chero chinhu semudzi kunze kwekunge iwo uchizobatwa. masisitimu ekugadzirisa (izvo zvisingawanzoitika), saka hutachiona hungadai hwakave hwakaderera zvakanyanya kana iwe uine system iyi.
Makambani anofanirwa kufunga nezvezvinhu izvi pavanenge vachishandisa masystem, uye vodzidzisa vashandi vavo mumatekinoroji akachengeteka kwazvo e data ravo, kwete nekuisa "zviri nyore" zvavanochengeta pamitengo (marezinesi anofanira kubhadharwa) kozouya hutachiona nekutengesa….
70% yeinternet ndeye Unix / linux,
Iyo nharo yekuti haina kunyanyo shandiswa ndeyekunyepa,
CSF neLFD: mapurojekiti maviri anozokubatsira kunatsiridza chengetedzo
WolfQuest: iyo yekuteedzera yevhidhiyo mutambo kwaunogona kuve mhumhi